Wadamada Qatar Iyo Sucuudiga Oo Iska Weeraray Baraha Bulshada Iyo Waxyaabaha Ay Isku Adeegsadeen | Baligubadlemedia.com
Wadamada Qatar Iyo Sucuudiga Oo Iska Weeraray Baraha Bulshada Iyo Waxyaabaha Ay Isku Adeegsadeen
Dagaalka muddada sanadka ah u dhaxeeya Qatar iyo dalalka Sucuudiga iyo kuwa kale xulufada la ah ayaa la’isu adeegsanayaa nooc cusub oo sawaariiq ah : kuwaas oo ah baraha bulshada ee been abuurka ah, wararka been abuurka ah iyo waliba in la jabsada xogaha ku kaydsan internetka.
5tii bishii June ee sanadkii hore ayey dalalka Sucuudiga, Imaaraatka, Baxreyn iyo Masar ayaa xidiidhka u jareen dawlada Qatar oo ay ka wada tirsanaayeen dalalka gacanka ee xagga saliida hodanka ku ah. Waxa ay ku eedeeyeen in ay taageerto kooxaha argagixisada.
Waxaa la xidhay xuduudaha dhulka, badda iyo cirkaba, iyada oo xitaa lasoo eryay muwaadhiniintii reer Qatar ee dalalkan ku sugnaa.
Balse baadhitaan ay samaysay laanta afka Carabiga ee BBC-da ayaa lagu ogaaday in inta badan fariimahan ay dirayeen ciwaano been abuur ah oo uu kumbuyuutar maamulo, laguna shubay barnaamij faraha in ay qoraaladan diraan si loo marin habaabiyo ra’yiga guud.
Waxaa jira labo erey bixin oo ay kala isticmaalaan labada dhinac ee is haya, hadba kan aad la hadasho, tusaale dhinac waxa ay haystaan ereyga ah “xayiraad’, dhinaca kale “mamnuucis”.